कलाकारले अंग होइन, आफ्नो कला र क्षमता प्रर्दशन गर्ने हो - samabeshionline.com
कलाकारले अंग होइन, आफ्नो कला र क्षमता प्रर्दशन गर्ने हो
प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७५, शुक्रबार १२:१२
सानैदेखि कलाकार बन्ने सोच भएकीे मोडल मिस शंखु पछिल्लो समयमा आधुनिक तथा तामाङ कलाकारिताको क्षेत्रमा व्यस्त मोडलहरुमध्ये पर्छिन् । दर्जन भन्दा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी उनले ‘आबा ङाछा’ लगायतका टेजिसिरियलमा पनि काम गरिरहेकी छिन् । उनै मिस शंखु ललितपुर जिल्ला कोन्ज्योसोम गाउँपालिका वडा नं. २ शंखस्थित बुवा श्याम कुमार लामा तामाङ र आमा भिम माया लामा तामाङको कोखबाट जन्मिनु भएकीहुन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग इकमान लामाले गरिएको कुराकानी:
आजकाल म धेरै जसो चाहिँ टेलि सिरियलमा व्यस्त छु । त्यसपछि म्युजिक भिडियो र संस्थाको काम पनि भ्याउँछु ।
कलाकार बन्ने मेरो बाँच्चदेखिको सपना थियो, त्यही भएर यही क्षेत्र नै रोजे ।
के मोडलिङ क्षेत्रमा लागेर जिविका चलाउन सकिन्छ ?
यो क्षेत्रमा पहिला नाम अनि दाम कमाइन्छ । नाम कमाउन सक्यो भने अवस्य पनि जिविका चलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसको लागि मिहेनत पनि त गर्नु प¥यो नि । कुनै पनि क्षेत्रमा मिहेनत र संघर्षविना सफलता प्राप्त गर्न सकिदैन । अहिले यो क्षेत्रमा च्याउसरी कलकारहरु उम्रिरहेका छन् । यसको मतलब कलाकार बढ्नु नराम्रो हो भन्न खोजिएको चाहिँ होइन । कलाकार बन्नु एक हिसाबले खुशीको कुरा नि हो । अब यति धेरै कलकारहरुमा जसको नाम बजारमा राम्रोसँग चल्यौ उसले कमानउ नि सकिन्छ । कतिपय सिनियर कलाकारहरुले चलाई रहेको पनि छ ।
कलाकारिता क्षेत्रमा शरीरिक शोषण पनि हुन्छ भन्छ नि ?
यो कुरालाई हो र होइन दुबै भन्न मिल्छ । किनभने नयाँ कलाकारलाई अलि हेप्न खोज्ने, मौका पाएसम्म तिमीलाई छिट्टै हिट बनाई दिन्छु भनेर कलाकारमाथि शोषण गर्न खोज्नेको पनि कमी त छैन यहाँ । फेरी यसैलाई हो भनौ भने कतिपय कलाकारहरु कसैको लोप, लालच र झुठो आश्वसनमा नपरी आफ्नो मेहनत र प्रतिभा देखाएर यो क्षेत्रमा निर्धाक्कले अगाडी बढीरहेको पनि छ । समग्रमा बन्नुपर्दा यो कुरा चाहिँ व्यक्ति स्वयंममा नै भर पर्छ जस्तो लाग्छ ।
अभिनय बाहेक अरु के गर्नु हुन्छ ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको नृत्य र अभिनय हो । त्यसपछि चाहिँ म एन जि ओ तिर काम गर्छु । अनि म आफ्नो तामाङ जातीको भाषा र संस्कृति जगाउने अभिनय र तामाङ साहित्य संस्था (तामाङ सोसियल क्लव) मा आबद्ध छु ।
प्रायः जसो मोडलहरुले हट फोटो सुट गरिएको देखिन्छ, के त्यस्तो फोटोहरुको आवश्यकता पर्छ र ?
एउटा कलाकारले देखाउने भनेको आफ्नो कला, प्रतिभाको क्षमता हो । कुनै शरिरको अंग अझ भन्नु पर्दा संवेदनशील अंग होइन । त्यसैले कलाकार भएपछि हट फोटो सुट गर्नु र त्यस्तै खालको अभिनय गर्नु पर्छ, कलाकारले अंग प्रदर्शन नै गर्नु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन । त्यो हुनु र गर्नु गलत हो ।
फुर्सदका क्षणमा के गर्नु हुन्छ ?
म सुटिङ नहुँदा अफिसको कामले भ्यालि बाहिरको फिल्डतिर जान्छु । यी दुवै काम नहुदाँ बेला चाहिँ घरमै बसेर इन्टरनेटमा धेरै जसो लोक दोहोरी डान्सिङ म्युजिक भिडियो र सिनियर कलाकारहरुको अन्तरबार्ता हेर्छु ।
तपाईलाई कुन कलाकारको अभिनय मन पर्छ ?
मलाई सलोन बस्नेत र केकी अधिकारीको अभिनय मन पर्छ ।
यति राम्री हुनुहुन्छ, मायाजालमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
हा हा हा ….। यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिनै आएन । छ भनम् कि छैन भनम् यसको उत्तर चाहिँ अर्काे पटकको अन्तरबार्ता वा भेटमा है । हा हा हा
तपाई त म्युजिक भिडियो, टेलिसिरियलसँगै विभिन्न संघ संस्थाहरुमा पनि आबद्ध देखिन्छ समय कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
हो, म सबैतिर जस्तो नै देखिन्छ । यता कलाकार क्षेत्रतिर उता संघ–संस्था र गुठीतिर पनि आबद्ध छु । जे होस्, पहिलो कुरा इच्छा हुनुपर्छ । मन र इच्छा भएपछि समय आफै व्यवस्थापन हुन्छ ।
म सम्पुर्ण गीत–संगीत र कलाकारप्रेमी दर्शक स्रोतहरुलाई म के भन्न चहान्छु भने हामी कलाकारहरुको भगवान भनेकै तपाईहरु हो । हामीलाई सफल बनाउने वा नबानाउने भन्ने कुरा पनि तपाईहरुमै भरपर्छ । त्यसैले हामीलाई सफल बनाउनको लागि सदैब साथ र माया गरिरहनु होला । आशा छ, हामी जस्तो नयाँ र संर्घषरत कलाकारहरुलाई आगामी दिन पनि अझ धेरै माया गर्नु हुनेछ । फेरी पनि नयाँ कलाकारलाई पनि अवसर दिनु होला भन्न चहान्छु ।
चट्याङ लागेर एकको मृत्यु, चार घाइते
गायिका सुनिता लामिछानेको सुमधुर आवाजमा “मर्नु पर्या छ ” हेर्नुहोस भिडियो सहित